Maarso 16 waxay noqon kartaa taariikhda aan ku heli karno Samsung Galaxy S9 | Androidsis
Axadda, Febraayo 25, waxay noqon doontaa maalinta shirkadda South Korea ee Samsung ay ku soo bandhigi doonto, Shirweynaha Caalamiga ah ee Moobaylka ee Barcelona, ​​Galaxy S9 oo muddo dheer la sugayay., labadiisa calan ee soo socota oo ka mid ah dhowr jeer ayaan horay kula soo hadalnay. In kasta oo aysan noqon doonin illaa 16-ka Maarso - taariikh aan horay uga soo hadalnay hore - inaan iibsan karno, si joogto ah, caalami ah, sida lagu sheegay warbixin uu ku faahfaahinayo tallaabooyinka ay Samsung suuqa ka qaadi doonto S9 iyo S9 +.
Warbixinta uu siiyay Samsung laftiisa ee uu macluumaadkan innoogu muujinayo, Waxaa sidoo kale naloo keenay macluumaad kale oo noo sheegaya maalmaha aan ku keydi karno intaan la sii deyn. Wax badan ayaan kuu sheegaynaa!
Xusuuso taas 29-kii bishii Maarso ee sanadkii hore ayaa la soo bandhigay Samsung Galaxy S8 iyo S8 +, labada taleefannada casriga ah ee ugu muhiimsan shirkadda Aasiya maanta, oo la bilaabay Abriil 21, taas oo ka dhigan 23 maalmood oo ah farqiga u dhexeeya labadan dhacdo.
Sababtoo ah habka ay u socoto shirkadda fadhigeedu yahay Kuuriyada Koonfureed, Maarso 16 waxay umuuqataa inay tahay taariikh munaasib ah oo aan ku aragno labadan dhamaadka sare ee laga heli karo suuqa, maaddaama ay ku dhowaad ahaan lahayd isla xilligii uu S8 haystay waqtigaas, laga soo bilaabo soo-bandhigidiisii ​​iyo helitaankiisii ​​iibka.
Intaa waxaa sii dheer, sida laga soo xigtay xogta kale ee tuurtay daadigan, waxay diyaar u ahaan doontaa ballansasho horay loo sii qaaday laga bilaabo Maarso 2-8 ee Kuuriyada Koonfureed, iyo, kuwa waddanka la yiraahdo, way heli karaan, kahor, laga bilaabo Maarso 9 illaa 15.
Dhinaca kale, marka laga hadlayo Yurub, miiraha caanka ah ee Faransiiska Roland Quandt wuxuu sheegay in, Laga bilaabo isla maalinta la soo bandhigayo, ee ah 25-ka Febraayo, horay ayaan u dalban karnaa. Xitaa iyadoo sidaas ah, maalinta la soo bandhigayo labadan mobiil, Samsung waxay naga saari doontaa shaki iyo mala-awaal, sidaasna waxay ku shaacin doontaa taariikhda rasmiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Maarso 16 waxay noqon kartaa taariikhda aan ku heli karno Samsung Galaxy S9